Posted By: KongoLisolowaa: July 4, 2020 00: 45 No Comments
Dhowr qarniyo, xoolo-cuneenuhu had iyo jeer wuxuu naftiisa u siiyay raaxada helitaanka khasnadahayaga ama maalkeenna. Kumaa ama maxaa fududaynaya helitaankan fudud? Waa qeybteenna annaguna annagaa ah kan u siiya ugaaliyaheena si sahlan oo uu ugu helo maalkeenna iyo maalkeenna. Si tan loo saxo, waa inaan midaysnaano.
Markii ay jirto isku duubni iyo midnimo u dhaxaysa dulmiga la dulmay, cadowga (ugaarsade ama dulmigu wuxuu noqonayaa ugaarsada). Markaan ka tagno carqaladaheena nacasnimada ah iyo kala qeybsanaanta, anagoo dooraneyna midnimo ama midnimo, waxaan ilaalin karnaa mirahayaga, maalkeenna iyo maalkeena qaaliga ah ka soo horjeedka xeeladaha cadawgeenna (duudsiga ama dulmiga).
Waxa ugu weyn ee dimuqraadiyadda madow / Afrika waa midnimo: "Laakiin ma jiro waddo kale oo midnimada Madowga / Afrikaanka ah oo aan ahayn baarista iyo ixtiraamka sharafta shaqsiyadeed!" "
Maahmaah: Waxaa qoray Victor Hugo
Oct01 12: 38